Agaasimihii wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Puntland oo lagu dilay Qarax ka dhacay Gaalkacyo | raascasayrmedia.com
← Ciidamada dowladda howlgalo dad lagu qabtay ka sameeyay Muqdisho
M/weyne Shariif oo lagu soo dhaweeyay Tanzania(Sawiro) →
April 16, 2011 · 2:18 pm
Agaasimihii wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Puntland oo lagu dilay Qarax ka dhacay Gaalkacyo
Qarax maanta ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu dilay agaasimihii wasaaradda garsoorka, cadaaladda iyo arrimaha diinta ee Puntland, Sheekh Ismaaciil Xaashi Xuseen.
Dilka mas’uulkan ayaa loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago, iyadoo la sheegay in dhowr qof oo shacab ah ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid laga maqlay guud ahaan xaafadaha degmada Gaalkacyo.
Qaraxa lagu dilay mas’uulkan sida aad ah looga yaqaan degmada Gaalkacyo ayaa wuxuu ka dhacay illinka hore ee xarunta shirkadda isgaarsiinta Galcom ay ku leedahay degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Mas’uuliiinta Puntland oo ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qaaxaas ayaa sheegay inay howgallo baaritaanno socdaan lana qabtay dhowr qof oo looga shakiyay inay ka dambeeyaan weerarka lagu dilay agaasimaha.
Goobjoogayaal ayaa sheegay in Sheekh Ismaaciil uu shalay ka istaagay masaajid ku yaalla waqooyiga magaalada Gaalkacyo isagoo ka hadlay qaraxyada inta badan ka dhaca degmadaas isagoo sheegay in laga soo abaabulo Koonfurta Soomaaliya.
Weerarkan ayaa qayb ka noqonaya falalka ammaan xumada ah ee ka taagan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, oo ay ka taliyaan labada maamul ee Puntland iyo Galmudug.